English to Malagasy Computer Words | Voambolana solosaina
English to Malagasy Computer Words | Voambolana solosaina
Computers are a very important device at the present time, so the interest in it is increasing day by day all over the world. Almost everyone in this world feels comfortable in their own language or mother tongue. Keeping in mind this interest of the people, we have translated almost all the words related to computer in your mother tongue with simple meanings. so that it is easy for the Malagasy speaking people to understand. Here on this page the most important computer related words are presented in English to Malagasy language.
Meaning in Malagasy Language
Ny serasera iray dia fetra iray ifampizarana ireo singa roa na maromaro misimisy fampahalalana momba ny fifanakalozana amin'ny rafitry ny solosaina.
Ny "Malware" dia programa amin'ny solosaina natao hanodinana sy hanimba solosaina raha tsy eken'ny mpampiasa
Ny mpamaham-bolongana dia olona manoratra votoaty ao anaty tranonkala iray.
Caps Lock dia bokotra eo amin'ny fitendry computer izay mahatonga ny litera rehetra amin'ny soratra latinina sy Cyrillic miforitra amin'ny alalàn'ny renivohitra.
Program kely izay manome alàlan'ny fahaiza-manao omen'ny rafitra miasa
Fampahalalana iray mitovy amin'ny 1000 megabytes
Hacking no voambolana rehetra ho an'ny karazana fanararaotan'ny solosaina hanimba ny fiarovana ny rafitra informatika hafa hangalatra data.
Andian-tsindrim-bokatra 8 mifampizara izay mampiseho endrika iray amin'ny solosaina no misy.
eBook no fohy amin'ny "boky elektronika." Izy io dia boky nomerika azo vakiana amin'ny solosaina, e-mpamaky, na fitaovana elektronika hafa.
Kitiho avo roa heny ny fihetsika manindry bokotra totozy bokotra indroa tsy mila mihetsika ny totozy.
Wi-Fi midika fa afaka miditra na mifandray amin'ny tambajotra mampiasa onjam-peo ianao, tsy mila mampiasa tariby.
root dia manondro ny lisitry ny lahatahiry avo lenta amin'ny rafitra rakitra.
Ny laharana nomerika dia andiany tsy manam-paharoa izay mamaritra ny fivoaran'ny solosaina
Fitaovana fitahirizana data izay tsy fahatsiarovana lehibe amin'ny solosaina iray
Ny fanitarana filename dia marika voafaritra ho toy ny haingo amin'ny anaran'ny rakitra solosaina.
Karazana efijery avo lenta ho an'ny solosaina finday
Forms rakitra nampidirina malaza ho alaina mozika digital.
Ao amin'ny computing, kisary dia sary misy na ideogram naseho teo amin'ny efijery amin'ny solosaina mba hanampiana ilay mpampiasa hitety rafitra informatika.
Ny tranokala dia rafitra iray ifandraisan'ny tranokala ho an'ny daholobe azo idirana amin'ny Internet.
Manondro ny fizotran'ny fidirana rafitra sy Internet tranokala azo antoka.
Fampiharana iray manome ny mpampiasa fitaovana ilaina hanoratana sy hanitsiana sy fanoratana lahatsoratra ary handefasana azy io amin'ny mpanao pirinty
Macintosh dia tsipika amin'ny solosaina finday sy solosaina novolavolain'i Apple.
Andian-dàlana izay azo tanterahan'ny solosaina
Andian-dahatsoratra mihetsika ho iray amin'ireo fampahalalana tokana
Fampisehoana iray izay fitaovana ampiasaina amin'ny fitaovana fampiasa amin'ny fitaovana penina na rantsan-tanana ihany koa.
Ny sary kely tsy manam-pahamehana eo amin'ny efijery
Mijery ny mahita sy manitsy ireo lesoka ao amin'ny kaody fandaharan'asan'ny solosaina
Ny fitambaran'ny solosaina sy rafitra rafitra iray
Java dia fiteny fanoratana avo lenta novolavolain'i Sun Microsystems.
Ny fandalinana na fampiasana ireo rafitra (solosaina sy fifandraisan-davitra) amin'ny fitahirizana, fahazoana aina ary fandefasana vaovao.
Ny integer dia tahirin-kevitra mampiditra data, karazana data iray izay manondro ny isan'ireo integers matematika sasany
Pejy iray toy ny Facebook na Twitter, izay ahafahanao mifandray amin'ny namana sy mizara vaovao.
Solosaina manokana maivana maivana
Ny habetsaky ny fampahalalana izay azo tehirizina amin'ny kapila kapila
Ny kernel dia programa an'ny solosaina izay fototry ny rafitra fiasan'ny solosaina ary mahafehy tanteraka ny zava-drehetra ao amin'ny rafitra.
Ny angon-drakitra vokarin'ny solosaina iray dia antsoina hoe output.
Fandaharana informatika ahazoana antontan-taratasy na rakitra na angon-drakitra ao anaty banky iray
Rafitra izay ampahany amin'ny rafitra lehibe kokoa
Fandaharana angon-drakitra ao anaty andalana sy tsanganana, na mety amina endrika sarotra kokoa.
Label tarehimarika nomena ny fitaovana tsirairay mifandraika amin'ny tamba-jotra solosaina izay mampiasa Internet Protocol ho an'ny fifandraisana.
Izay solosaina izay mifatotra amin'ny tambajotra solosaina
Fampisehoana manaitra na karazan-javatra iray manokana
Inbox dia fitehirizam-bokatra iray anaty fampiharana mailaka izay mandray hafatra ho avy.
Ny fitaovana fidirana dia singa iray ampiasaina hampiasana data sy fifehezana ny marika amin'ny rafitra fanodinana fampahalalana
Ny varavarankely iray dia singa mifehy ny sary.
Andian-dahatsoratra fohy amin'ny alàlan'ny tranokala iray amin'ny alàlan'ny kapila mafy eo amin'ny solosainao rehefa miditra amin'ny tranonkala ianao
Orinasa iray manolotra orinasa sy orinasa hafa miditra amin'ny Internet
Ny zo tsy harovana amin'ny fidirana an-tsehatra na tsy voatakona.
Solosaina informatika izay mahazo fampahalalana amin'ny solosaina misy mpampiasa nefa tsy eken'ny mpampiasa
Program kely sy tsy nahazo alàlana hanimba ny solosaina
Cursor dia famantarana iray nampiasaina hanehoana ny toerana misy ankehitriny eo amin'ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny monitor computer
Fitaovana fitahirizana elektronika
Solosaina iray manome serivisy ho an'ny mpanjifa ahafahan'ny fidirana amin'ireo rakitra sy mpanonta ho loharano mitovy amin'ny tambajotra solosaina
Ny lahadin'ny trano dia manondro ny lahadinan'ny fanalahidy eo amin'ny fitendry izay miala sasaka ny rantsantanana rehefa tsy manoratra ny iray
Ny kapila dia boribory mafy na floppy, fisaka ary vatosoa izay manana vaovao mamaky ary hosoratana ao
Ny ampahany amin'ny solosaina izay iresahanao rehefa te hanoratra zavatra ianao na miresaka amin'ny namanao.
Fahatsiarovana ho an'ny fitahirizana ny vaovao vetivety raha toa ka ampiasaina ny solosaina.
Mampahomby ny solosaina rehefa te hampiasa azy io ianao.
Ny programa sy fampahalalana momba ny fandehanana hafa ampiasain'ny solosaina iray
Rindrambaiko azo tanterahina izay mandeha amin'ny solosaina.
Olona iray izay mampiasa serivisy serivisy na serivisy
Manodidina ny 1 000 000 bita.
Solosaina misy portable & mety ampiasaina mandritra ny dia.
Lisitry ny valin'ny fanontaniana mahazatra momba ny vokatra na serivisy manokana
Raha hitady fanazavana momba ny Internet
Gazety an-tserasera izay anaovan'ny olona ny zavatra niainany
Fitaovana famokarana izay mamokatra taratasy mafy avy amin'ny solosaina
Karazana programa informatika manova lahatsoratra tsotra.
Ny mpampiasa interface (UI) dia toerana ifandraisan'ny olona sy ny milina.
Mampihetsi-po tokoa ny rafitra fandidiana sasany dia manome tahiry fohy sy famindrana ao anatiny ary eo anelanelan'ny programa programa
Endrika iray amin'ny famolavolana solosaina momba ny fiasa fototra sy ny rafitra izay iorenan'ny rafitra informatika rehetra.
Rafitra misy ny singa elektronika mifandray
Solosaina afaka manamboatra data na fampahalalana saika eo noho eo
Solosaina manokana natao ho an'ny fampiharana ara-teknika na siantifika.
Karazan-dàlana na rindrambaiko ratsy izay toa ara-dalàna nefa afaka mifehy ny solosainao
Nampiasaina mba hamoronana tarehimarika manokana ary ho fanodinana ireo kaody baiko hafa
Ny singa fifehezana an-tsary izay ametrahana ny bokotra eo amin'ny efijery, kisary, menus, na singa hafa amin'ny famoahana na famokarana.
Ny toetry ny rafitra iray amin'ny fotoana manokana.
Fandaharana iray izay mahita sy manala ireo virus amin'ny solosaina
Mba hampifantohana lensa zoom mba hahazoana sary kely kokoa, na fijery lavitra kokoa
Misolo tena ny tontolon'ny solosaina
Ny CAPTCHA dia karazana fitsapana-valim-panadinana ampiasaina amin'ny angovo hamaritana raha olombelona na tsia ny mpampiasa.
Endri-javatra ao amin'ny Microsoft Windows izay mamela ny mpampiasa hamadika ny fanjakan'ny solosaina
Solosaina izay manatona na akaiky ny tahan'ny fandidiana ambony indrindra ankehitriny
Amin'ny fandaharan'asa, ny teny fanalahidy dia teny iray voatokana amin'ny programa satria ny dikan'ny teny dia misy dikany manokana.
Ny fanitsiana ny ampahany amin'ny zavatra mifandraika amin'ny tsirairay
Fitaovana mametaka amin'ny fivoahana AC ary manolotra volavolan-doka DC amin'ny bateria azo averina.
Solosaina izay somary kely dia mipetraka eo amin'ny felatan'ny tanana
Ny flowchart dia endrika iray mamaritra ny fizotran-javatra na asa iray
Famintinana ny "assistante digital digital"
Fitaovana hanova ny antontan-taratasy ho antontan-taratasy elektronika izay azon'ny solosaina ampiasain'ny solosaina
Raki-peo nomerika nomerika azo alaina ao amin'ny Internet mba alefanao amin'ny solosaina na fitaovana finday
Ny fahatolorana dia fomba ampiasain'ny solosaina hampihenana ny rakitra amin'ny alàlan'ny fampihenana ny isan'ny bitany
Touch screen dia efijery fisehoana solosaina ary fitaovana fampidirana ihany koa
Iteration dia ny famerimberenan'ny asa na fomba fiasa ao anaty programa solosaina.
Ny famafana dia fampitsaharana ny solosaina hanesorana na hamafa
Fizaran'ny kapila mafy an'ny solosaina ahafahanao mametraka rakitra
Maimaimpoana maimaim-poana io rindrambaiko io ary aparitaka tsy ara-potoana amin'ny fanombanana.
Kapila ho an'ny fitahirizana ny mombamomba ny solosaina.
Rafitra fiarovana manakana ny fidirana amin'ny solosaina na tambajotra
Mba hahafahana mandika ny antontan-taratasy, firaketana na sary niasa teo amin'ny sehatra fitahirizana
Manondro ireo fitaovana izay ampiasain'ny solosainao hampandeha ny rafi-pandaminana sy fandaharana
Sokafy ao ambadiky ny PC amin'ny alàlan'ny fampifandraisanaana periferiana
Mailaka "junk" tsy mitaky sy tsy voaravina na lahatsoratra tsy ilaina amin'ny alàlan'ny newscast na bilaogy.
Solosaina finday, solosaina finday, rindran-tsary sy solosaina.
Ny Finder no interface tsara amin'ny solosaina finday Macintosh
Tahirin-kevitra izay mitahiry angona amina tsipika marindrano sy tsanganana mitsangana.
Ny tranofiara iray dia fitaovana fanaraha-maso ny fanoherana ampiasaina amin'ny lalao solosaina sy haitao manampy
Ny dashboard iray dia karazana interface misy mpampiasa izay manolotra fampahalalana amin'ny mpampiasa
Amin'ny informatika, firmware dia kilasy manokana amin'ny rindrambaiko solosaina izay manome fifehezana ambany ambany ho an'ny hardware manokana an'ny fitaovana iray.
Fitaovana kely sy ivelany ho an'ny fitahirizana angon-drakitra, izany dia mampifandray amin'ny socket USB.
Fomba fanehoana endrika iray asehon'ny andian-tsoratra
Decompress dia manondro ny fanitarana ny fisie mihetsika ho amin'ny endrika voalohany
Hacker dia olona iray mampiasa solosaina, tambajotra na fahaiza-manao hafa handresena olana ara-teknika
Manodidina ny 1000 basy.
Karazam-peo maro anisany ao anaty tarika iray manokana, indrindra ho an'ny fampitana famantarana.
Ny tsipika marindrano izay misy lisitr'ireo menus efa misy ho an'ny programa iray.
Rafitra tabilao na BBS dia rindrambaiko mpizara solosaina mihazona ny mpampiasa mampifandray amin'ireo rafitra mampiasa programa programa.
Toeram-baravarana mitsangana na marindrano izay matetika hita eo amin'ny zoro havanana na ambany ambany varavarankely izay ahafahanao manetsika ny faritra mijery ny fikandrana.
Olona iray izay manoratra fandaharan'asa amin'ny solosaina.
Amin'ny computing, virtoaly dia dika mitovy nomerao amin'ny tena izy.
Amin'ny informatika, ny booting dia fomba fanombohana solosaina
Ny totozy solosaina dia fitaovana entina hanondro tanana izay mahita fihetsika roa-dimby mifandraika amin'ny tany iray
Amin'ny informatika, ny fanarenana indray dia ny fomba izay averina mitohy indray ny rafitra solosaina mandeha.
Ny fitaratra dia mpizara iray izay manome dika marika marina avy amin'ny mpizara hafa.
Solosaina informatika izay manampy fiasa vaovao amin'ny programa fampiantranoana nefa tsy manova ny fandaharana fampiantranoana izany
Ny fomba fiverenan'ny famoahana rafitra dia averina amin'ny fidirana
Ny node dia singa fototra amin'ny rafitry ny angon-drakitra, toy ny lisitry ny fifandraisana mifandraika na firafitry ny hazo
Fivarotana Binary izay afaka manana sanda iray azo atao, 0 (diso) na 1 (marina).
Famindrana angon-drakitra ao anaty banky na tahirin-kevitra
Birao vita amin'ny fanalahidy izay, miaraka amin'ny totozy, no fitaovana fampiasa ho an'ny solosaina.
Ny plagiarism dia fihetsika mandika ny asan'ny olon-kafa ary avoaka ho toy ny anao ihany.
Fahadisoana kely (lesy) na lesoka amin'ny programa iray
Ny fampiharana iray dia karazana rindrambaiko iray izay ahafahanao manatontosa asa manokana
Finday finday manana asa mandroso mihoatra ny manao antso an-telefaona sy mandefa hafatra (SMS).
CD-ROM mijoro ho an'ny fahatsiarovana kapila fotsiny Compact Disc Read. Miasa toy ny compact disc izay mitahiry angon-drakitra solosaina.
Solosaina nomerika kely mifototra amin'ny microprocessor ary natao ampiasain'ny olona iray isaky ny mandeha
Nisy fakantsary nomerika natao haka sary sary nomerika ary alefa any amin'ny Internet
Boaty iray izay mamela ny solosainao hifandray amin'ny Internet.
Mba hampiakatra sy midina pejy, toy ny mijery ny tranonkala.
Lamba vita amin'ny vy matevina izay mampifandray ireo faritra samihafa amin'ny solosaina.
Amin'ny computing, ny baiko dia torolàlana amin'ny programa solosaina hanaovana asa manokana.
Ny fivoarana dia ny fizarana pejy web, sary sy ny rakitra amin'ny mpizara tranonkala.
Teknolojia tsy misy finday izay ahafahana mifampiresaka amin'ny finday.
Andinin-droa dikan-dahatsoratra, data, rakitra, na kapila, mamokatra rakitra na segondra roa na mihoatra izany
Ny ampahan'ny solosaina izay mifehy ny boky.
Fifandraisan-davitra mpampiasa mifototra amin'ny sary fa tsy soratra
Ny endrika ankapobeny amin'ny anaran'ny rakitra na lahatahiry iray, dia manondro toerana tokana ao anaty rafitra rakitra.
Ny fanokafana pejy amin'ny tranonkala tranonkala
Manoritsoritra ny fampiasana ny tariby optic fibre hampitana angon-droa amin'ny alàlan'ny pulses ny hazavana.
Mametraka sary na maneho hevitra ao amin'ny bilaogy na tambajotra sosialy.
Fitsipi-pitondrana na fomba fiasa handefasana data amin'ny fitaovana elektronika
Rehefa solosaina na mifandray any amin'ireo fitaovana hafa ny solosaina na fitaovana hafa dia lazaina fa "offline
Ny fitendrena solosaina dia fitaovana fampidirana ampiasaina hampidirana litera sy fiasa ao amin'ny rafitry ny informatika amin'ny alàlan'ny tsindry bokotra, na fanalahidy.
Mifandray na vonona handefa na mandray data miaraka amin'ny tamba-jotra solosaina
PC dia laharam-pahamehana ho an'ny "solosaina manokana". Ny Computer Computer IBM dia nampiditra ny anarana tao amin'ny anarany modely.
Torolalana mampifandray ny ampahany amin'ny programa iray amin'ny iray hafa
Tahan'ny fandefasana data ho an'ny modem
Ny fandaharana ara-panoharana ara-panoharana ao anaty programa informatika
Andian-tsoratra mitovy endrika mitovy aminy
Ny endri-tsoratra dia fitambaran'ny milina sy toetra hafa, toy ny habeny, ny tsipika ary ny spacing
Wiki iray dia tranonkala iray ahafahan'ny mpampiasa manampy sy manavao ny votoaty ao amin'ilay tranokala amin'ny alàlan'ny navigateur Web.
Programa rindrambaiko mandeha amin'ny solosainao
Fitaovana elektronika ho an'ny fitahirizana sy fanodinana angon-drakitra
Solosaina kely finday na solosaina fanolorana azy izay natao voalohany amin'ny fisaviana tranonkala.
Izy io dia manondro ireo sary mihetsika eo amin'ny efijery izay ahafahan'ny mpampiasa manindry, hisintona ary miala amin'ny totozy
Namaritra ho toy ny zava-misy na tarehimarika, na fampahalalana notehirizina na ampiasain'ny solosaina.
Ny piraty rindrambaiko dia voafaritry ny rindrambaiko mandika tsy ara-dalàna, izay mandika ny zon'ny mpamorona.
Didy iray ahafahanao mampiditra data ao anaty rakitra ao anaty rindranasa
Mainframe dia solosaina mahery vaika ampiasaina amin'ny asa fanodinana fampahalalana lehibe.
Karazana rakitra ho an'ny sary sy fomba iray ahafahana manindrona sary iray.
Lisitry ny asa miandry hiasa
Rindrambaiko omena tsy andoavam-bola
Rakitra informatika dia rakitra namboarin'ny rindranasa rindrambaiko
Mampiasa Internet mba hamoronana vondron'olona marobe amin'ny fizarana hafatra, fanehoan-kevitra ary fampahalalana hafa.
Ny fiasa dia sakana marika fehezan-dalàna voalamina sy azo ampiasaina ampiasaina mba hanaovana hetsika tokana mifandraika.
Rafitra iray hifandraisana tsy misy tariby amin'ny tamba-jotra iray
Hypertext dia aseho amin'ny solosaina na fitaovana hafa miaraka amin'ny andinin-tsoratra hafa izay azon'ny mpamaky fidirana avy hatrany.
Rindrambaiko solosaina izay manampy fiasa vaovao amin'ny programa fampiantranoana tsy misy manova ny fandaharana fampiantranoana azy mihitsy.
Ny tenimiafina dia andian-tsoratra izay ampiasaina amin'ny fanamarinana ny mpampiasa iray amin'ny rafitry ny solosaina.
Flash Drive dia karazana USB USB portable izay mitahiry sy mamindra data.
NET dia paikady serivisy serasera Microsoft hampifandraisana fampahalalana, olona, ​​rafitra ary fitaovana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko.
Ny fiarovana ny rafitra informatika sy ny fampahalalana amin'ny loza, ny halatra ary ny fampiasana tsy nahazoana alàlana
Fafindra avy ao anaty tahiry na antontan-taratasy
Ny ampahany amin'ny RAM ampiasaina amin'ny fitahirizana data
Junk Email dia mailaka elektronika tsy takiana
Ny anarana domain dia ampahany amin'ny URL, izany (Uniform Resource Locator.)
Ny totozy solosaina dia fitaovana entina hanondro tanana izay mahita fihetsika roa-dimby mifandraika amin'ny tany iray.
Midika izany fa tsy misy fandaharana fampiharana na ny rafitra fandidiana tsy misy afa-manangona intsony.
Fitaovana famoahana fitaovana dia fitaovana hafa ampiasaina handefasana data avy amin'ny solosaina ho any amin'ny fitaovana na mpampiasa hafa.
Ny fahazoana ny rafitra rafitra solosaina, indrindra ny tahiry fitehirizana angon-drakitra sy ny angovo, tsy fitantanana mivantana ny mpampiasa.
Ny navigateur web dia rindrambaiko rindrambaiko ahafahana miditra amin'ny fampahalalana amin'ny World Wide Web.
Ny paikadim-pahefana iray dia maneho soratra, torolàlana ho an'ny mpizara solosaina, na data hafa mampiasa rafitra roa.
Andianà firaketana mifandraika voatahiry
Ny fitifirana fitifirana iray dia sarin'ny desktop solosaina izay azo tehirizina ho tahiry sary.
Ny fitendry modely fanoratana mahazatra
DVD iray dia karazana media optika ampiasaina amin'ny fitahirizana angon-drakitra nomerika.
Tarika fandaharan'asa fantatra amin'ny anarana hoe operating system (OS) izay mifehy PC (solosaina manokana)
Fivoahana amin'ny solosaina
GPS dia rafitra fanamoriana radio izay ahafahan'ny mpampiasa ny tany sy ny ranomasina ary ny fiaramanidina an'habakabaka mamantatra ny toerana misy azy ireo.
Ampiasaina hamaritana ny data.
Rohy avy amin'ny rakitra hypertext mankany amin'ny toerana na rakitra hafa
Lisitry ny rakitra amin'ny solosaina izay voatahiry ao an-tsaina
Rehefa mandeha ny programa iray na azo tanterahina
Ny kisarisary dia sary na sary hita maso zavatra iray
Ny mpampiantrano tranonkala iray, na mpanome tolotra tranonkala fampiantranoana, dia orinasa iray izay manome ny teknolojia sy serivisy ilaina amin'ny tranokala na tranokala hitranga amin'ny Internet.
Ny bitika dia ampahany kely amin'ny fampahalalana izay ampiasain'ny solosaina.
Ny phishing dia fanafihana cyber iray izay mampiasa mailaka tsy voamarina ho fitaovam-piadiana.
Natao hamaritana ny tamba-jotra solosaina izay tsy misy fifandraisana an-tariby misy eo amin'ny mpandefa sy mpandray
Motherboard dia sehatra iray ahafahana mampifandray ireo faritra rehetra amin'ny solosaina miaraka
Programa misy ao na rindrambaiko misy azy
Fahatsiarovana RAM natokana ho fitahirizana buffer manokana
Ampidiro ny lakile fitendry izay napetaka hanomezana sonia ny solosaina mba hampidirana ny tsipika data na ny baiko izay natsipy fotsiny.
Ny webmaster dia ny tompon'andraikitra amin'ny fitazonana tranonkala iray.
Ny angon-drakitra momba ny solosaina dia fampahalalana voaangona na tehirin'ny solosaina.
Ny mpampiasa an-tanana voalohany amin'ny solosaina izay ahafahan'ny mpampiasa miditra amin'ny programa, ny rakitra ary ny lahatahiry.
Rafitra mahery vaika, rafitra fiasa amin'ny solosaina marobe (OS).
(RAM) no fitadidiana lehibe raha miasa mandritra ny fiasan'ny PC, vetivety izany.
Pejy iray ao amin'ny Internet izay mampiseho vaovao.
Sivan-javatra amin'ny singa mitovy tahiry ao anaty miafina
Teknolojia kely azo idirana izay mamela anao hanao zavatra fototra.
Solika fandrefesana vaovao
Firaketana an-tsoratra manokana. Mety misy angona toy ny soratra na programa iray
Ireo anarana domain dia ampiasaina amin'ny URL mba hamantarana ireo pejy Web manokana.
Rehefa te-hamindra zavatra ianao amin'ny ampahany iray amin'ny efijery mankany amin'ny iray hafa dia mila mitarika azy ianao.
Teny ampiasaina hilazana olona iray mamaky hafatra an-tserasera amin'ny forum fiadian-kevitra
Ny takelaka dia fampiharana amin'ny solosaina ho an'ny fandalinana ny fandaminana sy ny fitahirizana angon-drakitra amin'ny endrika tabular.
Fitaovana elektronika mifandray amin'ny tariby mankany amin'ny solosaina
Solosaina iray mifandraika amin'ny Internet izay mitazona andiana pejy web amin'ny World Wide Web
Fitahirizana vonjimaika ho an'ireo rakitra voafafa ao amin'ny mpampiasa iray rakitra mpampiasa
Ny peripheral amin'ny solosaina dia misy fitaovana ivelany izay manome fampidirana sy famoahana ho an'ny solosaina.
Ny fitaovan'ny solosaina dia ny faritra ara-batana amin'ny solosaina, toy ny tranga, monitor, totozy sns.
Tambajotra tambajotra an-tserasera manerantany
Ny streaming dia midika hoe mihaino mozika na mijery horonan-tsary amin'ny 'tena fotoana', fa tsy mandefa rakitra amin'ny solosainao ary mijery izany any aoriana any.
Ny faritry ny efijery amin'ny fifandraisana an'ny mpampiasa kisary izay hipoitra ireo sary sy ny varavarankely
Fitaovana elektronika azo raikitra ho an'ny fitehirizana sy fanodinana angon-drakitra.
Ny otrikaretina solosaina dia karazana programa amin'ny solosaina izay, rehefa tanterahana, mamerina ny tenany amin'ny alàlan'ny fanovana ireo programa solosaina hafa ary ny fampidirana ny kaody azy manokana.
Hard drive drive (HDD) dia fitaovana fitehirizana data elektronika izay mampiasa fitehirizana magnetika mba hitahiry sy hamerenany ny angon-drakitra nomerika.
Loham-baovao iray mitovy amin'ny 1000 kilao
Ny aotobisy iray dia subssystem izay ampiasaina hampifangaroana ireo singa amin'ny solosaina ary hamindrana angon-dresaka eo amin'izy ireo
Izy io dia manondro ireo karazana seranan-tserasera fahita fahita mahazatra amin'ny fampifandraisana ireo fitaovana periferal amin'ny solosaina.
Ny fitahirizana dia dingana iray izay ahitàna angon-drakitra nomerika ao anaty fitaovana fitahirizana data amin'ny alàlan'ny teknolojia informatika.
Ny tsindry dia ny fihetsika manindry bokotra totozy eo amin'ny solosaina raha tsy afindra ny totozy.
Amin'ny terminolohiya solosaina, ny mazoto dia matetika midika hoe mahavita mihetsika sy / na fanovana, raha toa kosa ny static midika hoe raikitra.
Ny ampahan'ny solosaina iray ahitana ny lahatsoratra sy ny sary mipoitra.
Manodidina ny 1.000.000.000 bita.
Teny natao indrindra ho an'ny programa informatika
Dot matrix dia teboka 2D teboka izay afaka maneho sary, marika na marika
Fitaovana ao anaty solosaina izay mamorona ny sary eo amin'ny efijery
Ny tsoratadidy dia lalana fohy azo averina izay mitarika ny navigateur mankany amin'ny pejy web manokana
Ny rindrambaiko izay mampifandray amin'ny hardware ary ahafahan'ny programa hafa mihodina.
Rafitra mpizara Internet manohana antontan-taratasy manokana.
Miresaka momba ny fiteny sy ny fitsipi-pitenin'ny fiteny fandaharana iray
Mba hanoratra valiny amin'ny zavatra hitanao amin'ny bilaogy na tambajotra sosialy.
Izy io dia ampahany lehibe amin'ny solosaina iray izay mifehy ny faritra hafa
Teny ifotony ho an'ny mpamoritra fanoratana fiteny
Ny hafatra mailaka avy amin'ny solosaina iray mankany amin'ny iray hafa.
Fonja iray ao ambadiky ny solosaina mampifandray ireo fitaovana ivelany
Ny navigateur dia programa toa an'i Firefox na Internet Explorer ..
Ny harika iray dia manondro hadisoana eo amin'ny programa informatika na rafitra misy fitaovana.
Amin'ny heviny tena fototra, ny programa rehetra ampiasainao amin'ny solosainao dia saran'ny rindrambaiko fampiharana.
Ny mpanao pirinty laser dia mpanao pirinty izay mampiasa taratra mifantoka na hazavana mifindra amin'ny famindrana lahatsoratra sy sary amin'ny taratasy.
Ny zavakanto Clip dia fitambarana sary na sary azo ampidirina antontan-taratasy na programa hafa.
Izy io dia manondro ireo teboka kely izay misy ireo sary eo amin'ny fampisehoana solosaina.
Karazana fitadidiana solosaina izay mety ho voafafa sy voamboatra elektrika.
Intranet dia tambazotra informatika misy fizarana vaovao.
Rafitra fandefasana loharanom-baovao misokatra izay manaparitaka an'izao tontolo izao ny solosaina manokana mankany amin'ny lohamilina mankany amin'ny fitaovana finday ary mihoatra ny tokony ho izy.
Famolavolana fitendry ho an'ny abidia-soratra latina
Format izay azo vakiana na tantanana solosaina
Solosaina solosaina noforonina Apple.
Ny fanitarana ny rakitra ho an'ny rakitra Microsoft Word.
Io dia manondro fandefasana data haingam-pandeha avo lenta izay ahafahan'ny tariby tokana mitondra data be dia be.
Ny DNS (Domain Name Service) dia mihetsika toy ny telefaona amin'ny adiresy Internet.
Ny asan'ny manova data na fampahalalana ho kaody
Mba hampidirana vaovao amin'ny fitendry.
Fitaovana maka famantarana ary mampiseho azy ireo
Famantarana tsy misy dikany izay misy dikany mahazatra
Kilobytes, megabytes, gigabytes. Amin'ny ankapobeny ampiasaina amin'ny fandrefesana ny fitadidiana sy ny fitahirizana solosaina.
Ny exabyte dia singa maro amin'ny andevo amin'ny fampahalalana nomerika.
Tarehimarika misy tarehimarika misy fanazavana
Adikin'ny rakitra na rakitsoratra amin'ny fitaovana fitahirizana misaraka
Ny teboka dia piksel tokana iray amin'ny fampisehoana matrix
Ny programa amin'ny solosaina dia atambatra torolàlana izay azon'ny solosaina tanterahina mba hanatanterahana asa manokana
Hatsangana ho an'ny tanjona manokana
Sary na sary kely eo amin'ny efijery solosaina izay tandindon'ny fampirimana, programa sns
Izay fitoerana kely rehetra
Miresaka momba ny rafitra fiasa manokana eo amin'ny andalana solosaina toy ny novolavolain'ny Apple Corporation.
Fanalahidy fanovana eo amin'ny fitendry iray, zatra mampiasa karazana litera sy litera hafa "ambony" hafa.
Ny marina dia midika hoe mampifanaraka ny lahatsoratra amin'ny alàlan'ny sisin'ny ankavia sy havanana.
Fahatsiarovana izay tsy azo ovaina amin'ny programa na mpampiasa iray
Manondro ireo karazana safidy fitahirizana data.
Ny algorithm dia andiana torolàlana natao amin'ny fanatanterahana asa manokana.
DOS (Disk Operating System) dia rafitra fiasan'ny baiko tsotra
Karazana rindrambaiko ratsy manaparitaka ny tenany avy amin'ny solosaina mankany amin'ny solosaina
Ny finday iray dia finday iray izay ahitanao ny firafitra mavesatra ankoatry ny fanaovana antso an-tariby sy fandefasana hafatra an-tsoratra
Singa iray ho an'ny mpampiasa interface tsara (GUI) izay mampiseho fampahalalana na manome fomba manokana
Modem dia fitaovana hardware izay manova ny angon-drakitra amin'ny endrika mety amin'ny haingam-pandefasana
Ilay fitaovana ampiasaina hampiasa kapila kapila
PDF mijoro ho an'ny "format rakitra portable". Raha ny tokony ho izy dia ampiasaina ny endrika rehefa mila mitahiry rakitra izay tsy azo ovaina
Lisitry ny fanontaniana izay matetika apetraka (momba ny lohahevitra iray nomena) sy ny valiny
Midika amin'ny tranonkala iray na serivisy izay manolotra loharano sy serivisy midadasika
Rafitra solosaina izay afaka mamorona, manafatra, mampiditra, mitahiry, mamerina, manova ary mamama
Compiler dia programa amin'ny solosaina izay mandika ny kaody amin'ny solosaina voasoratra amin'ny fiteny fandaharana iray amin'ny fiteny hafa
Seminera iray natao isaky ny internet.
Karazana varavarankely izay misokatra tsy misy mpampiasa misafidy "varavarankely vaovao" avy amin'ny programa iray
Format raki-tahiry izay manohana ny fanodinana data very.
Heloka bevava atao amin'ny ordinatera sy tambajotra ny cyber.
Toerana iray ahafahan'ny mpampiasa mampifandray amin'ny tambajotra na amin'ny Internet miaraka amin'ireo adaptatera tsy misy tariby.
Megahertz. Ity dia mamaritra ny hafaingananan'ny fitaovana solosaina.
Ny tambajotra sosialy dia tranonkala iray izay mampiray ny olona hiresaka, hizara hevitra ary hahaliana, na hiteraka namana vaovao.
Fiteny fandaharana nomanin'ny Sun Microsystems
Ny ampahan'ny solosaina izay mitahiry herinaratra ary manome herinaratra.
Baiko ao amin'ny fandaharan'asa informatika maro. Hanafoana ny fiovana farany natao tao amin'ny antontan-taratasy manaja azy amin'ny fanjakana tranainy izany
Ny zon'ny mpamorona dia fomba ara-dalàna hiarovana ny asan'ny mpanoratra iray.
Lisitry ny baiko izay tanterahin'ny programa na motera misy
Ny habaka dia tariby fampitana data nomerika ao amin'ny tambajotra an-tserasera sy ny fifandraisan-davitra
Ny rindrambaiko fototra izay mitantana solosaina
Ny pejy iray dia sakana tsy miovaova izay tadidin'ny fahatsiarovana virtoaly, izay nofaritan'ny fidirana tokana iray teo amin'ny latabatra pejy.
Mba hametrahana sary sy antontan-taratasy amin'ny solosaina amin'ny fampiasana scanner.
Mailaka tsy tiana
Loharan'ny tranokala pejy.
Fitaovana ampiasaina hampifandraisana ny solosaina amin'ny telefaona
Teny manan-danja ampiasaina amin'ny indexing na katalog
Rehefa te hanova zavatra amin'ny solosaina ianao dia mila mandeha mankamin'ny fikoloana.
Rindrambaiko izay mifehy ny fanatanterahana ny programa informatika ary mety manome serivisy isan-karazany
Scan dia teny iray mamaritra ny fizarana sary an-tsoratra ny sary, mamela azy io hotehirizina na ovaina amin'ny solosaina.
Izy io dia miresaka andiam-pampianarana siansa momba ny informatika natokana ho an'ny fizotran'ny famoronana, ny famolavolana sy ny fanodinana ary ny rindrambaiko manohana.
Miresaka momba ny lisitry ny fidirana amin'ny gazety ao amin'ny pejy Web.
Modely na fenitra amin'ny fanaovana fampitahana
Ny fananana vokatra mifanaraka amin'ny fampidirana
Rehefa manosika ny bokotra diso ianao dia indraindray handefa hafatra diso ho anao ny solosaina.
Amin'ny informatika, ny booting dia fomba fanombohana solosaina.
Nisy fakantsary horonantsary nampiasaina handefasana streaming na mbola horonan-tsary amin'ny alàlan'ny Internet.
Ny fiteny amin'ny solosaina no misy ny pejin-tranonkala.
Ny anjaran'ny solosaina sy ireo fitaovana rehetra mifandraika amin'izany.
Miresaka momba ny andiam-pitondrana izay andrana ankehitriny amin'ny fanodinana ireo solosaina
Ny scroll dia mampiasa angon-droa fijerena andalana misimisy eo amin'ny efijery fisehoana.
Ny isan'ny teboka na piksely santimetatra na santimetatra nampiasaina hamoronana ny sarin'ny efijery
Ny kapila lehibe ao anaty solosaina ampiasaina amin'ny fitahirizana programa sy fampahalalana.
Fifandraisan'ny mpampiasa ho an'ny fidirana amin'ny serivisy rafitra.
Ny lahatahiry iray dia toerana fitahirizana izay ametrahana rakitra maro amina vondrona ary hikarakara ny solosaina.
Ny kitendry totozy dia rakotra hametrahana sy totozy totozy solosaina.
Fitaovana kely azonao ampiasaina hamonjy ny antontan-taratasinao.
Ny encryption data dia mandika angon-drakitra amin'ny endrika hafa, na kaody, ka izay olona miditra amin'ny lakile miafina na tenimiafina fotsiny no afaka mamaky azy.
Fikambanana voalamina misy ifandraisany
Amin'ny informatika, PC Card dia fanitsiana ny serasera fifandraisana mifanila amin'ny solosaina, natao ho an'ny solosaina finday.
Ny mpamily iray dia singa amin'ny rindrambaiko izay mamela ny rafitra fandidiana sy fitaovana iray hifampiresaka.
Fitaovana elektronika na elektronika elektrika
Ny fandefasana dia midika fa ny data dia alefa avy amin'ny solosainao mankany amin'ny Internet.
Ny rindrambaiko dia programa iray ahafahan'ny solosaina manatanteraka asa manokana.
Ny fanalahidy iray dia iray amin'ireo bokotra fitendry
Manondro ny fahitana sy ny mazava amin ny sary iray
Ny Kindle dia e-Read portable novolavolain'i Amazon
Anarana iray manavaka olona iray amin'ny rafitra amin'ny solosaina
OCR dia mamela PC iray hamaky sary voarindra ary hamadika izany ho an'ny taratasy tena izy.
Hanesorana ny solosainao amin'ny loharanom-pahefana.